दुई खेलाडी शनिबार स्विट्जरल्यान्ड जाने- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
दुई खेलाडी शनिबार स्विट्जरल्यान्ड जाने
श्रावण १५, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — आईजेएफ युथ तालिम शिविरमा भाग लिन नेपालका दुई जुडो खेलाडी शनिबार स्विट्जरल्यान्डको लेसिन जाने भएका छन् । तालिममा सहभागी हुने खेलाडीमा आयुशसिंह साउद र सम्झना थापा छन् । प्रशिक्षक राजीव प्रधान पनि जानेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय जुडो महासंघ (आईजेएफ), ओलम्पिक सोलिडारिटी र सेर्गइ जुडो क्याम्पको संयुक्त आयोजनामा हुने तालिम अगस्ट १ देखि ७ तारिख हुनेछ । टोलीको हवाई टिकट/खान/बसोबास ओलम्पिक सोलिडारिटी र सेर्गइ जुडो क्याम्पले व्यवस्था गर्ने तथा स्थानीय खर्च आईजेएफले बेहोर्ने नेपाल जुडो संघले जनाएको छ ।
जुडो संघका अध्यक्ष दीपकहर्ष वज्राचार्यले तालिममा नेपालले लगातार तेस्रोपल्ट सहभागिता जनाउन लागेको बताए । दुवै खेलाडीलाई यू–१८ उमेर समूहअन्तर्गत राजविराजमा भएको लोकेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ स्मृति राष्ट्रव्यापी जुडो प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनका आधारमा छनोट गरिएको महासचिव धर्मकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले अनुभवी जुडो प्रशिक्षकहरूले तालिमका सहभागीलाई प्रशिक्षण दिने बताए ।
प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ २१:५०
छानबिनको जिम्मा मन्त्रालयलाई दिने एन्फाको निर्णय
श्रावण १५, २०७८ हिमेश
काठमाडौं — यो विवादको अन्त्य हो अथवा थप सुरुआत ? नेपाली फुटबलमा सल्केको विवाद र मतभेदपछि उत्पन्न परिस्थितिले खोजेको उत्तर कठिन छ, तर अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को शुक्रबार मुख्यालय ललितपुरको सातदोबाटोमा बसेको कार्यकारी समितिको बैठक नाटकीय र तनावपूर्ण रह्यो ।
दिउँसो ४ बजे सुरु हुन भनिए पनि केही ढिला सुरु भएको बैठकका क्रममा पत्रकारलाई एन्फा भवनको परिसरमै प्रवेश दिइएको थिएन । अनि एन्फाका उच्च पदाधिकारी अनिच्छुक हुँदै बोल्न करकापले मात्र तयार भए ।
एन्फा प्रवक्ता किरण राईले सुनाएका ४ निर्णय यस प्रकार रहे, त्यसमध्ये पहिले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिइएको थियो । धन्यवाद किन भन्दा अक्टोबरको पहिलो साता हुने साफ च्याम्पियनसिप नेपालले आयोजना गर्न सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पाँच करोड दिन स्वीकृति दिएको छ । दोस्रो निर्णय थियो, सन् २०२२ को वुमेन्स एसिया कप छनोटमा भाग लिने र यसअगाडि इरानलगायत देशसँग मैत्रीपूर्ण खेलका लागि पत्रकार गर्ने ।
तेस्रो निर्णयअनुसार साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि नेपालले बंगलादेश, भारत र सिंगापुरसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नका लागि पत्रचार गर्ने । चौथो र सर्वाधिक महत्त्वको निर्णय थियो, राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतारीको राजीनामा र यसका लागि उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङमाथि लगाएको आरोपबारे छानबिन गर्न नेपाल सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने । यी चारै निर्णय सामान्य रहे पनि बैठक भने चर्को असामान्य रह्यो ।
परिस्थिति आफैमा जटिल थियो । बैठक सकिन अगाडि नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङसँगै दुई उपाध्यक्ष कृष्ण थापा र वीरबहादुर खड्का तथा सदस्य दावा लामा बाहिर निस्के । चारैको अनुहारमा जहाँ आक्रोश थियो, त्यहीं निराशा पनि व्यापक देखिन्थ्यो । प्रवक्ता राई ती चारै जनालाई फकाउन पनि ब्यस्त देखिएन र फेरि बैठकमा सामेल हुन अनुरोध गरिरहेका थिए । तर, उनीहरू फर्केनन् । सबैभन्दा पहिले मिडियासामु खड्का प्रस्तुत भए र उनले दाबी थियो, ‘हामी नेपाली फुटबललाई गतिरोध हुन दिन्नौं ।’
यो एक प्रकारको व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति थियो । उनले पछि त्यसबारे थप प्रस्ट पारे, ‘हामीले प्रशिक्षक अल्मुताइरीलाई कारवारीका लागि माग राखेका थियौं, तर त्यसलाई अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले अस्वीकार गर्नु भयो । उहाँले कारबाही गरे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रिने बताउनुभयो, किनभने प्रशिक्षक कतारको सहयोगमा आएका हुन् ।’ त्यसपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङले बोले । उनी थकित देखिन्थे, निराश देखिन्थे । अल्मुताइरीको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमा उनलाई मनपरी गाली गरिएको हुनाले आक्रोशित पनि थिए ।
उनको भनाइ थियो, ‘एन्फा नेपाली फुटबलको सर्वोच्च संस्था हो, यसबाट हामीले जुन अपेक्षा राखेका छौं, त्यो पूरा भएन । प्रशिक्षकले अनुशासन तोडेका छन् र वरिष्ठ उपाध्यक्षमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उनीमाथि कारबाही गर्नु पर्ने थियो । उनले भलै सामाजिक सञ्जालमा राजीनामा थिए, तर औपचारिक रूपमा कतै राजीनामा दिएका छैनन् । उहाँले लगाएका विभिन्न आरोपका कारण मैले नेपाली फुटबलमा लामो समयदेखि गर्दै आएको योगदानको अवमूल्यन भएको छ ।’
उनले नेपाली फुटबलमा पछिल्लो समय विकसित भएका घटनाक्रमप्रति निराशा पनि पोखे र एन्फा आफूले गर्नु पर्ने निर्णय तथा काममा चुकेको पनि आरोप लगाए । बैठककै क्रममा प्रशिक्षक अल्मुताइरीलाई पनि बोल्ने अवसर दिएको थियो र यसक्रममा उनी आफै रिसाएर प्रस्तुत भए । बैठकका सहभागीहरूका अनुसार अल्मुताइरीले आफूलाई असुरक्षाको महसुस भएको र आफ्नो समर्थनमा एन्फा अगाडि नआएको पनि बताएका थिए ।
बैठकबाट चाँडै बाहिर निस्केकाका समूहको भनाइ थियो, प्रशिक्षक यसरी आक्रोशित भएर प्रस्तुत भएकोमै आपत्ति छ । प्रशिक्षक अल्मुताइरी एन्फा परिसरमा प्रवेश गर्दा र बाहिर निस्कँदा सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको थियो । उनी मिडियासामु प्रस्तुत पनि भएनन्, खाली सामान्य प्रतिक्रियाका क्रममा सबथोक ठीक रहेको संकेतमात्र दिए । अध्यक्ष शेर्पा पनि सकेसम्म मिडियासामु आउन नै चाहेनन् । अन्त्यमा आउन त आए, तर खालि समान्य प्रतिक्रिया मात्र दिए ।
उनको भनाइ थियो, ‘मैले जे जति गर्छुं, यथार्थमा आधारित भएर मात्र गर्नेछु ।’ अब के त ? यसको उत्तर भने कोही पक्षसँग पनि रहेन । खाली भनियो, पुरुष राष्ट्रिय टिमको तयारी र प्रशिक्षण केही रोकिएको थियो, अब त्यो फेरि सुरु हुनेछ । छानबिनका लागि एन्फाले माथिको उच्च तहलाई अनुरोध गरिएको छ । त्यसले अब काम गर्नेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङको प्रतिक्रियाले पनि के देखिएको छ भने बैठकले समस्या समाधान गरेको छैन । स्पष्ट, नेपाली फुटबलको नेतृत्वमा मतभेद थियो, अब मनभेद पनि उत्तिकै बढेको छ ।
प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ २१:२६
अफ्रिदीसँग आशा, चम्किए बर्ल
‘ए’ डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग : स्पोर्ट्स क्यासलको फड्को
कुशल तिमल्सिना, दीपक परियार
चेल्सीसँग सिटीको बदला
ईपीएल : काठमाडौं किंग्सको ललितपुरमाथि शानदार विजय